အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး
Tag Archives: အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး
OOYALA နားလည်နိုင်စွမ်း STARHUB'S NEW Streams BOX
အဆိုပါ StarHub Go ကိုလွှ Box ကို, အစွမ်းအားဖြင့် - အဆိုပါ Ooyala အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဖြေရှင်းနည်းကတော့ StarHub Go ကိုလွှ Box ကို StarHub, စင်္ကာပူမှာနေတဲ့ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Telco အော်ပရေတာများအတွက် High Quality နှင့်လူတစ်ဦးချင်း Entertainment ကအတွေ့အကြုံများကယ်တင်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်က All-In-One ဖျော်ဖြေရေးခရီးလမ်းဆုံးစတင် Ooyala အွန်လိုင်းဗီဒီယိုဖြေရှင်းနည်း။ ဤ box အော်ပရေတာအပေါ်ကို run ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးဖြစ်ပါတယ် ...
စဉျးစားကွညျ့ဆက်သွယ်ရေးအတွက် BroadcastAsia2018 အဆင့်ပေါ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကိုသတ်မှတ်ရန်
က Ultra HD ကိုပလေးအောက်, ထိုဆန္ဒပြပွဲများဟောင်ကောင်, 31 မေလ 2018 ကြားတွင်အိုင်ပီအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်စပ် SDI / IP ကိုထိန်းချုပ် - BroadcastAsia2018 (26-28 ဇွန်လ, Suntec စင်္ကာပူ) မှာဆက်သွယ်ရေးမီဒီယာကုမ္ပဏီအားအောင်မြင်စွာအကူးအပြောင်းအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း navigate ကူညီရန်ဒီဇိုင်းနည်းပညာများပြပါလိမ့်မယ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ ။ အဆိုပါရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးအာရှပစိဖိတ်ဈေးကွက်မှထောက်ခံမှု၎င်း၏အတိမ်အနက်ကိုလည်းထင်ရှားစေခြင်းငှါ, စဉျးစားကွညျ့နှစျခုနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ၎င်း၏ဆန္ဒပြပွဲများကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ် ...
ကိုရီးယားအကြောင်းအရာပလက်ဖောင်းသူတို့ရဲ့မီဒီယာစစ်ဆင်ရေးအာဏာ Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းကိုရွေးကောက်ပြီး
လုပ်ငန်းစဉ် automated နှင့် Dynamic Metadata စီမံခန့်ခွဲမှု, မြင်နိုင်စွမ်းပေးအမှားကိုလျှော့ချပါနှင့်ထိထိရောက်ရောက် Ooyala, software နှင့်ဗီဒီယို, ထုတ်လုပ် streaming များနှင့်ငွေဝင်များ၏ရှုပ်ထွေးရိုးရှင်းကြောင်းန်ဆောင်မှုများ၏ဦးဆောင်မှုပေးသူအားတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း, ထိုကိုရီးယားအကြောင်းအရာပလက်ဖောင်း (KCP) ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် K ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အမေရိကန်ဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီ -Drama အကြောင်းအရာ, အကြောင်းအရာနှင့် metadata ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့စုစည်းပလက်ဖောင်းအဖြစ် Ooyala Flex ကိုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအသုံးချဖို့ဖြစ်ပါတယ် ...
IPE IBC 2017 မှာ IDS ကွန်ယက်ကို-based display နှင့်ထိန်းချုပ်မှုမည်ဖြစ်သည်
IBC 2017, 15 - 19 စက်တင်ဘာလ, 11.D30 ရပ် - IPE IBC 2017 မှာယင်း၏ကောင်းချီးပြန်ကြားရေး Display System (IDS) အားနောက်ထပ်တိုးတက်မှုများ feature ပါလိမ့်မယ်။ IDS အထူးမီဒီယာနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့အရွယ်မှာ, ကွန်ယက်-based display နှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ စံသည် TCP / IP ကိုကျောရိုးအသုံးပြုဆက်ကပ်အပ်နှံ software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ device များပါဝင်သည်ဟု, IDS မဆိုကိုက်ညီမှခဲ့သည်ဆို၏နိုင်ပါတယ် ...
SGL dual AXF / LTFS Archive ပေးအသေအပျောက်အများဆုံးအမီလိုက် Facility MAX post မှ FLASHNET ရောင်းအားကိုကြေညာ
မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်အကြောင်းအရာ archive ကိုနှင့်သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲ SGL တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူကမူ Max Post ကို, Discovery ရဲ့တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့်အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်န်ဆောင်မှုများထောက်ပံ့ပေးသော Burbank အခြေစိုက် State-Of-The-Art ပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ, အသေအပျောက်အများဆုံးပြသထိမှန်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ် ဖမ်း, ခေတ်မီ Infinity ဒိုင်ခွက်နှင့်အတူ SGL ရဲ့ FlashNet archive ကို install လုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဤသည် SGL ရဲ့ပထမဦးဆုံး FlashNet Infinity ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မတိုင်မီက ...
SGL WAPA-TV ကိုပြန်ပေးကျြနှာလိုကျ FILE ကိုနဲ့ဆက်စပ်မှုတွေ Web Services plug-in ၏ပထမဦးဆုံးရောင်းအားကိုကြေညာ
မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်အကြောင်းအရာ archive ကိုနှင့်သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲ SGL တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, တစိတ်တပိုင်းဖိုင်မှတ်တမ်းနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်စပ်မှုတွေ Web ကိုန်ဆောင်မှုများ Plug-in ကို၏ပထမဦးဆုံးရောင်းချကြေညာလိုက်ပါတယ် Restore (Glookast စွမ်းအားဖြင့်) WAPA-TV ကို, အခြေစိုက်လွတ်လပ်သောရုပ်မြင်သံကြားဘူတာရုံမှ စန်း Juan, Puerto Rico ။ ဒါကြောင့်ဖွအဖြစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိုင်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို restore WAPA-TV အတွက်အဓိက feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ...
ဗိုလ်မှူးအမေရိကန်သတင်းကွန်ယက် Unified သတင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာ Dalet ဖို့စေ့ဆျော
Dalet ဦးဆောင်အမေရိကန်သတင်းထုတ်လွှင့် Dalet က Galaxy စွမ်းအားဖြင့်၎င်း Dalet Unified သတင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာရန်၎င်း၏ဒေသဆိုင်ရာသတင်းဘူတာအပေါငျးတို့သပြောင်းရွှေ့ဖို့အကြီးစား, Multi-site ကိုရောင်းချဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ State-Of-The-Art ဖြေရှင်းချက်တိုင်းဘူတာရုံအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးကိရိယာများ၏ suite ကိုအားဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လက်လှမ်းဗဟိုအကြောင်းအရာ repository ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါချိတ်ဆက်, ပွတ်တိုက်-အခမဲ့ Unified ...
SGL NAB 2017 စမ်းကြည့်ရန်
Booth မျှ: SL5306 SGL ရဲ့နည်းပညာက၎င်း၏အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်မျိုးစုံစနစ်များထားရှိရေးကြောင်းမီဒီယာပတ်ဝန်းကျင်မှာချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်နည်းပညာများကိုတစ်ခုခင်းကျင်းအကြားအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါလိုအပ်မှခွင့်ပြုထားတဲ့သူ့ရဲ့ပွင့်လင်းမှုစနစ်အတွေးအခေါ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ SGL ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာနယ်ပယ်တွင်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအကောင်အထည်ဖော်မည်ဟုဆိုသည်ကိုယ်စားပြုစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်: မီဒီယာ / ထုတ်လုပ်မှု, Mam, တည်းဖြတ်, ဗီဒီယိုဆာဗာများ, အလိုအလျောက်, ဂီယာနဲ့ Disk / တိပ် / optical / မိုဃ်းတိမ်ကို ...
2017 IMF ကလမ်းတွင်ပြသသည့်တစ်ပလက်တီနမ်ပံ့ပိုးကူညီသူအဖြစ် Tedial နှင့်အတူမိတ်ဆက်
ပေးခဲ့သည်အထူးကုစပွန်ဆာပေးသူများ, ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် Multi-စီးတီးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲဂါ, စပိန်မှာ Presents - Tedial, ဦးဆောင်လွတ်လပ်သောနှင့်ဆုရပေးခဲ့သည်နည်းပညာဖြေရှင်းချက်အထူးကု, တစ်ဖန်တစ်ဦးအဘို့အလမ်းအပေါ်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါမာစတာ Format ကို (IMF က) ၏က၎င်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိပညာတာဖြစ်ပါတယ် ": ဖိုင်မှတ်တမ်း-အခြေခံပြီးအကြောင်းအရာ၏အကျိုးကျေးဇူးများ Unleashing IMF က" အမည်ရှိ multi-မြို့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ။ ကုမ္ပဏီဖြစ်ရှိပြီးတစ်ဦးပလက်တီနမ်အဆင့်ဖြစ်နေဆဲမသာ ...
ဖြတ်တောက်ခြင်း-EDGE entry-level archives နဲ့ LTO စာကြည့်တိုက်အဖြေ, ပေး SGL AND QUALSTAR PARTNER
မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်အကြောင်းအရာ archive ကိုနှင့်သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲ SGL တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, တဲ 1219 အပေါ် NAB New York မှာ, Qualstar နှင့်အတူဒေတာသိုလှောင်မှုနှင့်အာဏာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအတွက်အထူးပြုတစ်ဦးပိုမိုစုံလင်လာအီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်လုပ်သူပူးပေါင်းခဲ့သည်။ SGL ရဲ့ FlashPack Entry-level ကို archive ကိုယခုတစ်ပြည့်စုံ archive ကိုအသေးနဲ့-to-အလတ်စားထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများကပေး Qualstar ရဲ့ entry-level LT06 / LT07 တိပ်စာကြည့်တိုက်နှင့်အတူကို bundle ဖြစ်ပါတယ် ...
SMPTE 2016 ကို AT အတိုင်းအဆမရှိ Dashboard နဲ့ SGL HIGHLIGHTS New Entry-level FLASHNET Lite Archive
မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများအတွက်အကြောင်းအရာ archive ကိုနှင့်သိုလှောင်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဖ်ဝဲ SGL တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, တဲ 2016 အပေါ် SMPTE 214 မှာ FlashNet Lite ကိုက၎င်း၏အသစ်အ Entry-level ကို archive ကိုဖြေရှင်းချက်မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အသစ်သောကြော့ user interface ကို FlashNet Infinity ဖြစ်ပါတယ်။ FlashNet Lite ကိုလေး configurations လာ: FL Disk ကို, FL တိပ်, FL Hybrid ကိုနှင့် FL Optical Disk ကို, ထိုအကြောင်းအရာသိုလှောင်မှုအတွက်ရွေးချယ်စရာပေး ...
EditShare, EndemolShine ဂျာမနီနှင့်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးအဘို့အ MoovIT ဝင်း IBC2016 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကို
EndemolShine ဂျာမဏီအဖြစ်မှန်ပြပွဲ "တောရိုင်းကျွန်း" ပေါ်တွင် EditShare shared သိုလှောင်မှုနှင့်ပုဂ္ဂလိကမိုဃ်းတိမ်ကိုဖြေရှင်းချက်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အသုံးပြုမှု-အစွန်းဖြတ်တောက်သည် ဖြစ်. , စက်တင်ဘာလ 13, 2016 - - ကမ္ဘာလုံးအမ်စတာဒမ်, အဆိုပါနယ်သာလန်ကိုဖြတ်ပြီးအစာရှောင်ထုတ်လုပ်မှု turnaround EditShare, အသိဉာဏ်က Shared သိုလှောင်မှုနှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်အတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေးများအတွက်ဂုဏ်သတင်း IBC2016 ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအနိုင်ရ entry ကိုမိတ်ဆက်ပြသ ...
GLOBECAST IBC 2016 စမ်းကြည့်ရန်
ရပ်: 1.A29 Globecast Globecast တကမ္ဘာလုံးခေတ်ရဲ့သွက်လက်နှင့်စပ်ရာမရှိသောအကြောင်းအရာဝယ်ယူ, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအဆက်မပြတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်လုံခြုံဖောက်သည်ဖြေရှင်းချက်များကိုတစ်ဦးဖြစ်ပေါ်နေသော IP ကိုဗဟိုပြုပတ်ဝန်းကျင်တွင် innovates ။ Globecast ဗီဒီယိုကိုအလှူငွေများနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့အရေအတွက်ကတဦးတည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစပ်ဖိုင်ဘာနှင့်ဂြိုဟ်တုကွန်ယက်ကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ဤကွန်ယက်တီဗီနေရာတိုင်းမှာ OTT, ဂြိုဟ်တုအပါအဝင် multiplatform ပေးပို့နိုင်ပါတယ် ...